Al-Shabaab Oo la wareegay Deegaan muhiim ah oo dhaca duleedka Gaarisa. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-Shabaab Oo la wareegay Deegaan muhiim ah oo dhaca duleedka Gaarisa.
On Dec 4, 2019 594 1
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday deegaan hoostaga magaalada Gaarisa ee dhulka NFD, oo ah dhul Soomaaliyeed oo ay Kenya xoog ku heysato.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weeraray saldhiga Police-ka ee deegaanka Dhicise, waxaana halkaas laga eyay ciidamadii Police-ka Kenya, iyadoona deegaanka ay si buuxda ula wareegeen.
Warar la helayo ayaa ku waramaya in ciidamada Xarakada Al-Shabaab ay gudaha u galeen saldhiga Police-ka, halkaas oo ay kasoo daabusheen saanado hub iyo agab muhiim ah, iyagoona markaas kadib dab ku daaray.
War kasoo baxay Taliska ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu yiri “Mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen dhulka NFD ee gummeysiga kujira waxay kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Dhicise oo dhaca duleedka degmada Gaarisa, ciidamada saliibiyiinta Kenya ayaa isaga firxaday deegaanka kadib markii ay ubabac dhigi waayeen gulufka Mujaahidiinta”.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay dab ku daareen xaruntii shirkadda Safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda Kenya.
Weli majiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka dowladda Kenya oo ku aadan weerarkii xalay ay ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen deegaanka Dhicise oo hoostaga magaalada Gaarisa ee dhulka NFD.
Abuufatima says 2 years ago
Sida umal nin lumayoo
Ibliis uu lugooyiyoo
Balo laabta jiiftiyo
Sandiiq Lee day mooyee
Libtiin waan ku faraxnaa
Laabtu way qabaw daa
Liibaana way tahay
Lurta kiinya gaadhiyo
Kafarada ad laysaan
Laaluush Wadaad cunay
Cay u idinla laacaa
Lurba naguma haysee
Kufri idinma loodshee
Liibaana oo wada
Loolan kaad kuhaysaan
Libta waad helaysaan
Inta Eebe lacnadiyo